အသကျရှူမဝဖွဈတတျသူမြားအတှကျ ကသဈရှကျ - Latest Myanmar News
July 24, 2021 by Latest Myanmar News
O xygen (အောကျဆီဂငျြ)ကဲ့သို့ အစှမျးထကျသောအရှကျလေး
အရေးတကွီးလိုအပျနတေဲ့အခြိနျဖွဈတဲ့အတှကျ လိုရငျးတိုရှငျးပွောပါမယျ ယုံကွညျစိတျခစြှာအသုံးပွုကွပါ ကြှနျတျောဟာပရဟိတသမားတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ
ကြှနျတော့ရဲ့ဇနီးကိုယျတိုငျဖြားနာပွီး အရသာမရ အနံမရ ဖွဈသှားပွီး သုံးရကျလောကျမှာအသကျရှုမဝသလိုခံစားရတယျ လို့ကွားသိရပါတယျ
ကြှနျတျောလညျးစိုးရိမျသှားပါတယျ အမြိုးသမီးဟာ လှနျခဲ့တဲ့ (2)နှဈလောကျက TV ဝဒေနာရှိခဲ့ပါတယျ အဆုတျအားနညျးတဲ့ရောဂါလညျးရှိပါတယျ
ဒါနဲ့ကြှနျတျောလညျး facebook မှာဖတျရတဲ့ ခှေးတောကျရှကျကအစ ဖတျမိသမြှအရှကျတှကေို ရှုကွညျ့ဘို့ပွောပါတယျ ဒါပမေဲ့မသကျသာဘူးလို့​ အကွောငျးပွနျလာပါတယျ
အတနျကွာစဉျးစားရငျး လှနျခဲ့တဲ့ ၁၀ နှဈလောကျက မိတျဆှတေဈယောကျပွောတာလား ဆောငျးပါဖတျလိုကျရတာလား ဆေးကမျြးထဲမှာတှလေို့ကျရတာလားတော့မမှတျမိတော့ပါဘူး
အဲဒီအပငျဟာ အခွားသဈပငျတှထေကျ အောကျဆီဂငျြ ပိုပွီးထုတျလှတျတယျလို့သိခဲ့ရတာ သှားသတိရတယျ
စမျးကွညျ့ရငျကောငျးမလား အတျောကွာအောငျစဉျးစားရပါတယျ အမြိုးသမီးရဲ့ အဆုတျက သာမနျလူတှလေိုမကောငျးတော့ လုပျခိုငျးလိုကျတော့မှ တဈခုခု ဖွဈသှားရငျ ရငျကြိုးရကွီးရဲ့လို့တှေးပွီး ဆုံးဖွတျရခကျနတောပေါ့
စမျးသပျရမှာ မဝံမရဲဖွဈနတောပေါ့ နောကျဆုံးတော့မကျြစဆေုံ့မိတျပွီး အောကျဆီဂငျြကလညျးမရ ဆေးခနျးသှားပွဘို့ကလညျးမလှယျ ဒီအတိုငျးထားရမဲ့အတူ အရှကျတောငျစားခဲ့သေးတာပဲဆိုပွီး
ကနျြတဲ့အရှကျတှေ မရှူတော့နဲ့ အဲဒီအရှကျကို ခုခကျြခငျြးသှားခူး အရှကျကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျ ခမြှေပွီး ဖွေးဖွေးခငျြးရှုကွညျ့ဘို့အကွောငျးကွားလိုကျတယျ ပွောလိုကျပွီး စိတျမအေးနိုငျဘူး
ဘာမြားပွနျကွားရမလဲဆိုပွီး ရငျတမမနဲ့ပေါ့ ခဏအကွာမှာတော့ ပွောမပွတတျလောကျအောငျ ဝမျးသာစရာသတငျးကွားရပါတော့တယျ
အရှကျကို အားပါးတရရှူလိုကျတာ ရငျထဲကိုပေါ့သှားတာပဲတဲ့ အသကျရှုရတာလညျးခြောငျသှားတယျ အရငျအတိုငျးပဲတဲ့ ကြှနျတျောဝမျးသာလိုကျတာဘယျပွောကောငျးမလညျးဗြာ
မွနျမာပွညျကပွညျသူတှေ အသကျကယျဘို့အောကျဆီဂငျြလိုနတော ငါကူညီနိုငျပွီးဆိုပွီး ဝမျးသာလှနျးလို့ မကျြရညျတောငျကခြဲ့ရပါတယျ
ဒါပမေဲ့ ခကျြခငျြးမပွောသေးပဲသုံးရကျအဲဒီအတိုငျးဆကျရှုကွညျ့ပွီးတော့မှ ခုလို အမြားပွညျသူမြားအားမြှဝခေငျြးဖွဈပါတယျ
အရှကျကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျ ရဆေေးရစေဈပွီး ခမြှေပွီး ပုံမှနျဖွေးဖွေးခငျြးရှုပေးခငျြးဖွငျ့ အသကျရှုမဝ အောကျဆီဂငျြလိုနသေောသူမြား သကျသာကောငျးမှနျသှားမညျမှာအမှနျဖွဈပါကွောငျး အမြားပွညျသူတို့အားမြှဝလေိုကျပါတယျခငျမြာ
အဲဒီအရှကျကတော့ လူကွီးမငျးတို့ပါတျဝနျကငျြမှာ အလှယျတကူရနိုငျတဲ့ ကသဈပငျက ကသဈရှကျပဲဖွဈပါတယျခငျမြာ အညှနျ့အရှကျမြားကို ဟငျခြိုလညျးခကျြသောကျလို့ရသလို ပွုတျတို့လို့လညျးရပါတယျ
ဟငျးခြိုနဲ့ တို့စရာတို့အနနေဲ့ကတော့ ကြှနျတျောအပငျစစိုကျကတညျးက စားဖွဈနတော ကွာပါပွီ အသကျရှုမဝ အောကျဆီဂငျြကနြပေါတယျ အောကျဆီဂငျြလိုနတေဲ့သူမြား အောကျဆီဂငျြကဲ့သို့ အစှမျးထကျသော ကသဈရှကျအား ရှူပေးလို့ရပါကွောငျး ရှူပေးကွပါရနျ သတငျးကောငျးပါးအပျပါတယျခငျဗြာ
ကြှနျတော့ရဲ့အိမျရှငျမကတော့ ကသဈရှကျကို လကျထဲကမခရြှူပေးနတေဲ့အတှကျ အသကျရှူခြောငျလို့သကျသာလာပွီး လေးရကျမွောကျနမှေ့ာ အရသာပွနျရလာပွီး အနညျးငယျသကျသာလာပွီဖွဈတဲ့အတှကျ မိတျဆှအေပေါငျးတိုလညျး လကျတှသေုံ့းကွညျ့ပွီး ပွနျလညျမြှဝပေေးကွပါရနျ မတ်ေတာရပျခံပါရစေ…..
မှတျခကျြ။ ။ လူနာအောကျဆီဂငျြကခြိနျမှာ အရှကျကိုခမြှေရှူခိုငျပွီး ပုံမှနျဖွဈသှားလြှငျ အောကျမှာပွထားသောပုံအတိုငျး Mask ထဲသို သဈရှကျကိုခမြှေပွီး အပေါကျလေးငါးပေါကျဖောကျ၍ အမွဲတပျထားလြှငျ နောကျထပျအသကျရှူမဝ မဖွဈတော့ပဲ ပုံမှနျအတိုငျးနနေိုငျသှားမှာဖွဈပါတယျ(အောကျဆီဂငျြပေးထားသကဲ့သို့ လူနာသကျသာပွီး ကောငျးသှားမှာဖွဈပါတယျ)
မွနျမာပွညျကွီး ရနျသူမြိုးငါးပါးရနျမှ ကငျးဝေးပါစေ
မွနျမာပွညျကွီး ကပျကွီးသုံးပါးမှ အမွနျးဆုံးလှတျမွောကျပါစေ….
သတ်တဝါခတျသိမျး တရာကိနျး အေးငွိမျးသာယာရှိကွပါစေ….
O xygen (အောက်ဆီဂျင်)ကဲ့သို့ အစွမ်းထက်သောအရွက်လေး
အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် လိုရင်းတိုရှင်းပြောပါမယ် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုကြပါ ကျွန်တော်ဟာပရဟိတသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော့ရဲ့ဇနီးကိုယ်တိုင်ဖျားနာပြီး အရသာမရ အနံမရ ဖြစ်သွားပြီး သုံးရက်လောက်မှာအသက်ရှုမဝသလိုခံစားရတယ် လို့ကြားသိရပါတယ်
ကျွန်တော်လည်းစိုးရိမ်သွားပါတယ် အမျိုးသမီးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (2)နှစ်လောက်က TV ဝေဒနာရှိခဲ့ပါတယ် အဆုတ်အားနည်းတဲ့ရောဂါလည်းရှိပါတယ်
ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း facebook မှာဖတ်ရတဲ့ ခွေးတောက်ရွက်ကအစ ဖတ်မိသမျှအရွက်တွေကို ရှုကြည့်ဘို့ပြောပါတယ် ဒါပေမဲ့မသက်သာဘူးလို့​ အကြောင်းပြန်လာပါတယ်
အတန်ကြာစဉ်းစားရင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပြောတာလား ဆောင်းပါဖတ်လိုက်ရတာလား ဆေးကျမ်းထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာလားတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူး
အဲဒီအပင်ဟာ အခြားသစ်ပင်တွေထက် အောက်ဆီဂျင် ပိုပြီးထုတ်လွတ်တယ်လို့သိခဲ့ရတာ သွားသတိရတယ်
စမ်းကြည့်ရင်ကောင်းမလား အတော်ကြာအောင်စဉ်းစားရပါတယ် အမျိုးသမီးရဲ့ အဆုတ်က သာမန်လူတွေလိုမကောင်းတော့ လုပ်ခိုင်းလိုက်တော့မှ တစ်ခုခု ဖြစ်သွားရင် ရင်ကျိုးရကြီးရဲ့လို့တွေးပြီး ဆုံးဖြတ်ရခက်နေတာပေါ့
စမ်းသပ်ရမှာ မဝံမရဲဖြစ်နေတာပေါ့ နောက်ဆုံးတော့မျက်စေ့ဆုံမိတ်ပြီး အောက်ဆီဂျင်ကလည်းမရ ဆေးခန်းသွားပြဘို့ကလည်းမလွယ် ဒီအတိုင်းထားရမဲ့အတူ အရွက်တောင်စားခဲ့သေးတာပဲဆိုပြီး
ကျန်တဲ့အရွက်တွေ မရှူတော့နဲ့ အဲဒီအရွက်ကို ခုချက်ချင်းသွားခူး အရွက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ် ချေမွပြီး ဖြေးဖြေးချင်းရှုကြည့်ဘို့အကြောင်းကြားလိုက်တယ် ပြောလိုက်ပြီး စိတ်မအေးနိုင်ဘူး
ဘာများပြန်ကြားရမလဲဆိုပြီး ရင်တမမနဲ့ပေါ့ ခဏအကြာမှာတော့ ပြောမပြတတ်လောက်အောင် ဝမ်းသာစရာသတင်းကြားရပါတော့တယ်
အရွက်ကို အားပါးတရရှူလိုက်တာ ရင်ထဲကိုပေါ့သွားတာပဲတဲ့ အသက်ရှုရတာလည်းချောင်သွားတယ် အရင်အတိုင်းပဲတဲ့ ကျွန်တော်ဝမ်းသာလိုက်တာဘယ်ပြောကောင်းမလည်းဗျာ
မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေ အသက်ကယ်ဘို့အောက်ဆီဂျင်လိုနေတာ ငါကူညီနိုင်ပြီးဆိုပြီး ဝမ်းသာလွန်းလို့ မျက်ရည်တောင်ကျခဲ့ရပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ချက်ချင်းမပြောသေးပဲသုံးရက်အဲဒီအတိုင်းဆက်ရှုကြည့်ပြီးတော့မှ ခုလို အများပြည်သူများအားမျှဝေချင်းဖြစ်ပါတယ်
အရွက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ် ရေဆေးရေစစ်ပြီး ချေမွပြီး ပုံမှန်ဖြေးဖြေးချင်းရှုပေးချင်းဖြင့် အသက်ရှုမဝ အောက်ဆီဂျင်လိုနေသောသူများ သက်သာကောင်းမွန်သွားမည်မှာအမှန်ဖြစ်ပါကြောင်း အများပြည်သူတို့အားမျှဝေလိုက်ပါတယ်ခင်မျာ
အဲဒီအရွက်ကတော့ လူကြီးမင်းတို့ပါတ်ဝန်ကျင်မှာ အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ ကသစ်ပင်က ကသစ်ရွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်မျာ အညွန့်အရွက်များကို ဟင်ချိုလည်းချက်သောက်လို့ရသလို ပြုတ်တို့လို့လည်းရပါတယ်
ဟင်းချိုနဲ့ တို့စရာတို့အနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော်အပင်စစိုက်ကတည်းက စားဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ အသက်ရှုမဝ အောက်ဆီဂျင်ကျနေပါတယ် အောက်ဆီဂျင်လိုနေတဲ့သူများ အောက်ဆီဂျင်ကဲ့သို့ အစွမ်းထက်သော ကသစ်ရွက်အား ရှူပေးလို့ရပါကြောင်း ရှူပေးကြပါရန် သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော့ရဲ့အိမ်ရှင်မကတော့ ကသစ်ရွက်ကို လက်ထဲကမချရှူပေးနေတဲ့အတွက် အသက်ရှူချောင်လို့သက်သာလာပြီး လေးရက်မြောက်နေ့မှာ အရသာပြန်ရလာပြီး အနည်းငယ်သက်သာလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေအပေါင်းတိုလည်း လက်တွေ့သုံးကြည့်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ…..
မှတ်ချက်။ ။ လူနာအောက်ဆီဂျင်ကျချိန်မှာ အရွက်ကိုချေမွရှူခိုင်ပြီး ပုံမှန်ဖြစ်သွားလျှင် အောက်မှာပြထားသောပုံအတိုင်း Mask ထဲသို သစ်ရွက်ကိုချေမွပြီး အပေါက်လေးငါးပေါက်ဖောက်၍ အမြဲတပ်ထားလျှင် နောက်ထပ်အသက်ရှူမဝ မဖြစ်တော့ပဲ ပုံမှန်အတိုင်းနေနိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်(အောက်ဆီဂျင်ပေးထားသကဲ့သို့ လူနာသက်သာပြီး ကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်)
မြန်မာပြည်ကြီး ရန်သူမျိုးငါးပါးရန်မှ ကင်းဝေးပါစေ
မြန်မာပြည်ကြီး ကပ်ကြီးသုံးပါးမှ အမြန်းဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ….
သတ္တဝါခတ်သိမ်း တရာကိန်း အေးငြိမ်းသာယာရှိကြပါစေ….
အနံ့ အရသာ ပြောကျလြှငျ